WAR CABDULLAHIYOOW RAGGA LA HADAL
Shirwac A. Ali
Sida intiina badan ay la socoto waxaa soomaliya u socda shir lagaga hadlayo aayaha wadanka, iyo sidii loo samata bixin lahaa ubadka abaaday ee dibad yaaca ah wareegayana daafaha caalamka iyo meel kastaa oo xun oo laga naxi karo runtii. Hadaba maadama dhibka ka taagan wadankii uu noqday afkiibaa juuqda, ayaa hadana waxaa kusoo gaaraya hadalo runtii kaa yaabiya oo naxdin badan, mararka qaarkoodna aad isleedahay ragu ma sidaan bay u liiteen.
Cabdiqasim salaad xassan ayaa ugu horeeyey nin u dhuunta cabdullahiga uu cabdi waaxid iska arkooday inleyn waa adeerkiise, cabdiqasim waxaa uu dirsaday ergay si Cabdullahi iyo isaga loo wada hadal siiyo, waxaase yaab leh miyuusan ku kalsooneyn raga ehelkiis ah ee ay meel wada degen yihiin. Cabdiqasimwaa uu ku hungoobay qorshihiisaa oo waxaa uusan aqoon cabdullahiga uu doonay in uu la dhiil gareeyo.
Waxaan kaloo dhacday in uu Muuse Suudi Yalaxoow meel kastaa marshay, ee ahaa “aniga iyo cabdullahi ma wada hadalno, heshiisna ma nihin ee heshiis baa loo baahan yahay in hogaamiyeyaasha la dhax dhigo si xal loo gaaro” hadaad hadal ahaan u fiirsato waa dood sax ah, balse maxaa ay huwan tahay. Hadalkaan Muse kama sal gaarin runtiina waxaa uu ahaa nin ficil qaaday oo wax walbaa oo weyn isaga oo aanan fiirin nuxurkooda u heystay mid wax tarleh.
Hadaba Cismaan Xassan Cali Caato ayaa isna wadadii maray, kadib markii uu si bareer ah u sheegtay in isaga iyo cabdullahi Yusuf ayan wada hadlin, waxaa yaab leh cabdullahi maxaa ku gaar ah oo uu caato keligiis ugala soo dhex baxay Somalida shireysa. Cismaan Caato waxaa kale oo uu hadana sheegay in uu isagaba cadkiisa ka rajeynayo dowlada dhalaneysa, hadalkaan oo ah markii ugu horeysay abad ee Cismaan caato afkiisa laga maqlo. Hadaba maxaa kulmiyey heshiis doonka kooxaha somalida ee maanta ay la doonayaan cabdullahi Yusuf.
Waxaa Jirta aayad qur’aan ah oo leh “ TAXSABAHAM JAMIICAN WA QULUUBAHUM SHATAA” oo ah aayad ka hadlaysa dadka iyagu ka shiraya wax ayan niyad u heyn amaba daacad ayan ka aheyn amaba dad quluub diintu ka qoyan tahay aanan laheyn, hase ahaatee anigu kama wado diin waa ka maran tahay quluubta ragan balse dhaqankooda ayaa u’eg in ayan niyad u heyn waxa ay ku balamaan had iyo goor.
Taariikhda kama dhicin Hogaamiye Daarood oo loo kala yaaco, waxaan naqaanay hogaamiyeyaal xamar isku shuba hadba marka ay wax isugu toosi waayaan, balse marakan waa ay ka duwan tahay, loomana kala harin oo markii cabdullahi la loodin waayey ayaa la bilaabay in daal lala agfadhiisto. Ethiopia ayaa wadata, waa cadawga diinta, waa nin ad-adag oo aanan naxariis laheyn. Waa af xun yahay iwm ayaa lala caadeystay hogaamiyahan wax walba soo jiiray, waxaana ugu yaabka badan in isaga lagu dooran doono doorashada soo socota, sababtuna waxaa weeye yaa dhiban oo daryeelka u baahan. Dadweynuhu ma aha inta caloosha balaaran ee qurbaha ku dhaqan dharag awgeedna hadli la’ ee kuwa xaashiyaha iyo bacaha cuna ee weliba inta usoo baaqi noqota lagaga furto wadooyinka. Waa kuwa ka go’ay in ay biilaan ehelkoodan baaba’ay ee xawaaladaha loo agtaagan yahay, amaba madax furashada loogu heysto somaliya, cabdullahina kuwaas ayuu ehel u yahay ee ogaada.